Tuesday October 08, 2019 - 07:02:55 in Wararka by Super Admin
Dowladda Turkiga ayaa ku dhawaaqday in uu gaba gabo marayo qorshahay ay ciidamadeedu ku qaadayaan howlgal melleteri oo ka dhan ah maleeshiyadka kurdiyiinta ee maamula waqooyiga wadanka Suuriya.
Rajeb Dayib Erdogaan ayaa iclaamiyay in ciidamada Mareykanka ee ku sugan Suuriya ay bilaabeen in ay faarujiyaan deegaannada ku dhow xuduud beenaadka ee dhanka Suuriya wuxuuna xaqiijiyay in saraakiisha Americanka ay ku wargeliyeen bilaabidda howlgalka bariga wabiga Alfuraat.
Isagoo garoonka diyaaradaha magaalada Ankara kula hadlayay warbaahinta xilli uu kusii jeeday dalka Seerbiya ayuu muujiyay sida mamaulka Trump uu ugo'aansaday in uusan qeyb ka noqon wax uu ugu yeeray howlgalka ka dhanka ah argagaxisada Kurdiyiinta.
Taliska ciidanka Mareykanka ayaa isna sheegay in aysan qeyb ka noqon doonin howlgalka mellereri ee turkigu ku qaadayo waqooyiga Suuriya, dad goob jogayaal ah ayaa sheegay in ay arkayeen kolonyooyin katirsan ciidamada Mareykanka oo dib uga guranaya deegaanno katirsan gobollada Raqa iyo Alxasakah oo dhammaantood kaabiga ku haya xuduudda Turkiga.
Afhayeen u hadlay Trump ayaa sheegay in ay bilaabayaan sidii ay ciidamadooda ugala bixi lahaayeen Suuriya wuxuuna mareykanku mas'uuliyadda dagaalka ka dhanka ah muslimiinta Shaam dusha usaaray dowladda turkiga.
Trump oo khadka taleefanka kula hadlay hoggaamiyaha Turkiga ayaa ugu baaqay in uu muhiimad gaar ah siiyo la dagaallanka jamaacaadka Jihaadiga Suuriya.
Dhinaca kale kooxaha Kurdiyiinta ayaa ku eedeeyay xukuumadda Washington in ay khiyaamaysay ayna qorshaynayso in ciidamadeeda ay kala baxdo Suuriya oo ay ku fiirsato duullaanka melleteri ee turkiga.
Kooxaha malaaxidada Kurdiyiinta oo saaxiib la ahaa mareykanka iyo xulufadiisa shantii sanadood ee lasoo dhaafay waxaa usoo galay waqti adag waxayna ka baqdin qabaan in ciidamada Turkiga ay buudka kula tuntaan islamarkaana kooxaha mucaaradka suuriya ay ka aarsadaan sababa laxiriiro falal dambiyeedyadii ay horay ugeysteen sanadadii ay taageerada melleteri ka helayeen ciidamada mareykanka.